Happy Lemontree Lodge - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguDharmik
Namaste & Welcome all you globetrotters to Nature's big screen of Happy Lemontree Lodge. Apho kungekho mfuneko yesilawuli esikude, akukho mali yokubhalisa kwaye akukho mboneleli wentambo. Ukuba selunxwemeni lomlambo i-Rapti ( Umlambo ophuma e-Himalaya ukuya kuhlangana neGanges e-Indiya, egubungela i-Chitwan National Park kumda osemantla) lonke uxinzelelo lwakho luya kuphelelwa.
Thina, uDharmik, uBilly Boy(ikati) kunye noNala(inja) usapho lwentlalontle, oluthanda indalo "iLamuni eyonwabileyo" siqale le lodge epholileyo nenoxanduva lwendalo ye-bamboo. Ngokusebenzisa izinto eziphilayo kunye neemveliso eziveliswe ekuhlaleni, ukwahlula inkunkuma kunye nezinye izenzo sizama ukuzinza kangangoko. Indawo yethu ibekwe ngokuthe ngqo elunxwemeni lomlambo iRapti kwaye igqunywe ngumthunzi, iRhino Apple Trees, kwaye kungekudala iza kuba yimithi yelamuni.
Yindawo yabo balungele ukufunda kunye nokwabelana, ukuvusa umphefumlo, kunye nokukhulula ingqondo. Apho unokudibana nabahambi abaziyo okanye uphumle kwaye uzifumanele ixesha uwedwa. Yiba nekomityi elungileyo yekofu yesihluzi seFrench! okanye usele ibhiya ebandayo, ngelixa ubukele ukutshona kwelanga okuhle.
Ngamathub’ athile uya kubona umkhombe usiya kuhambo lwawo lwemihla ngemihla kwelinye icala lomlambo okanye iintaka ezintle zibhabha.
Kwaye okokugqibela kodwa singakunika iipancakes ezivuza umlomo, iismoothies kunye nencasa kakhulu (veg) curry's.
Okwangoku sisaxakekile siphucula le ndawo de ibe yiparadesi yokwenyani, kodwa ivulekele iindwendwe. Njengoko sele sifumene abahambi abaninzi abonwabileyo.
Sikwalungiselela yonke imisebenzi enokubakho yeenqobo ezisesikweni ezingaphezulu kwendalo-kunye nezilwanyana ezinobuhlobo kunye nokwazisa uluntu.
Ke bhukisha inqwelomoya yakho, pakisha iibhegi zakho kwaye uvumele lonke uxinzelelo lwakho luphele kancinci!
ILodge yoMthi weLemon eyonwabileyo ikhankanywa njengendawo ephezulu eSauhara kumda weChitwan National park. Sijikelezwe ziikhefi kunye nerestyu, kodwa ukuba uhamba ngebhayisekile kancinci uya kuzifumana ukuyo indalo entle ngakumbi apho kungekho bomi babakhenkethi benzekayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Dharmik
Sinobuhlobo njengosapho olungathanda ukunceda kwaye sibonise abantu okanye senze intetho ngamaxesha athile. Nangona kunjalo, sikwayaqonda ukuba ezinye iindwendwe zikhetha ukunxibelelana okuncinci kunye nababuki zindwendwe. Ke, ngokuqinisekileyo sigcina indawo ethile kwaye sikunika inkululeko yakho.
Sinobuhlobo njengosapho olungathanda ukunceda kwaye sibonise abantu okanye senze intetho ngamaxesha athile. Nangona kunjalo, sikwayaqonda ukuba ezinye iindwendwe zikhetha ukunxibel…